Vola narotsaka tamin’ny Mobile money Sandoka ireo 200 000AR nomen’ilay lehilahy
Ampefiloha. Nanao “dépot” fandrotsaham-bola mitetina 200 000Ar teo amina cash point akaikin'ny hopitaly HJRA ity lehilahy ity.
Fanendahana eny 67 Ha Maty voatifitry ny polisy ny jiolahy iray
Mpanendaka miisa telo miaraka amin'ny sabatra lava lela no nanendaka lehilahy saika hanatitra olona tetsy 67 ha omaly. Rehefa azon'ireto olon-dratsy ny vola sy ny entana teny amin'ilay lehilahy dia nanendaka vehivavy andeha hivavaka indray izy ireo ka lasa ihany koa ny vola sy ny baiboly.
Gadra 17 mbola tsy hita any Farafangana 2 tapitrisa Ar ny valisoa ho an’izay manam-baovao
Namoaka filazana sy fampahafantarana ny Fanjakana tamin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Fitsarana mpiahy ny fandraharahana ny fonja, nampian’ny avy amin’ny mpitandro filaminana telo lafy (Zandarimaria,
Fitantanana ny fonja Esorina izay tsy mahavita azy
60% amin`ny voafonja dia voaheloka. 40% tsy latsaka kosa dia voatazona am-ponja (prévenu ).
Famoahana vary 44 taonina an-tsokosoko Lehilahy 6 no voasambotra tany Toamasina
Lehilahy miisa enina sy mpiambina amina orinasa iray, no tra-tehaky ny Polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny Boriboritany voalohany Toamasina ny 20 Septambra raha nikasa hamoaka an-tsokosoko vary milanja 44 taonina avy amina toeram-pitahirizan’entana (entrepôt) iray tao Tanandava Toamasina.
Moto nifandona tamina taxibe 180 Tovolahy iray maty tsy tsa-drano
Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona afak’omaly alahady 13 septambra hariva teny Ambodivoanjo lalana Andriantsihoarana Ratsimbazafy tokony ho tamin’ny 07 ora sy 20 minitra hariva.
Raha tsiahivina dia nahatohina olona maro ny nahita tamina fahitalavitra tsy miankina iray ny nitifiran’ny mpitandro filaminana misaron-tava teo amin’ny lohany tovolahy iray efa lavo mihohoka. Samy nampametra-panontaniana ny maro ary mbola iandrasan’ny rehetra valiny hatramin’izao ny anton’ity fihetsika izay hita ho nivaona ny fanajana ny zon’olombelona ity. Ny taona 2016 no efa nanomboka ny fanamarihana tanaty tatitra momba ny zon’olombelona teto Madagasikara fa nahalana ny fitondrana no nandray fepetra hanenjehana araka ny lalàna na hanasaziana ireo tompon’andraikitra nanararao-pahefana ary mbola olana hatrany ny tsimatimanota raha nisy ny tsy fahafehezana ireo mpitandro filaminana sasany tamin’ny fotoan’androny. Ny tena manahirana tamin’iny fihetsika iny, dia teny imasom-bahoaka, ary nisy ankizy zaza nahita ihany koa. Mety hisy ny fazavana ataon’ny mpitandro filaminana, fa mety ho sary iray manome vahana ny olona hanao fitsaram-bahoaka ny zavatra tahaka ireny. Tsy sanatria natao hanenjehana ny mpitandro ny filaminana fa kosa tena miteraka adihevitra ireny. Maro ny velon’ahiahy sao sanatria natahorana hamoaka tsiambaratelo no antony namonoana tsy nandalo fitsarana sy fanadihadiana ilay jiolahy izay efa nibaboka nanaiky hosamborina fa tsy nanohitra ? Hitohy sy vao mainka hirongatra ve izany ireo mpitandro filaminana heverina fa tsy voafehy ? Andrasana ny fanadihadiana sy fanazavana !